ramkrishna March 3, 2021
आलु भान्सामा अनिवार्य रुपमा पाइने परिकार हो । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ । विश्वभर नै आलुको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । अझ नेपाल र भारत लगायतको देशमा त यसको उत्पादन तथा उपभोग बढी हुने गरेको छ । आलूलाई भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको छ र यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर यसरी भण्डारण गरिएको आलु प्रयोगले त्यति फाइदा भने पु-याउँदैन । यस्ता केही आलु छन् जसालई प्रयोग गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पर्छ ।
टुसा अंकुराएको आलु
आलु खानुका ५ फाइदा
आलुका धेरैजसो परिकारहरु हामी मन पराउँछौ । बजारमा आलुको माग सदैव उस्तै हुन्छ । आलु एक सर्वसुलभ र सस्तो सब्जी तथा खाजा पनि हो। नेपालीका भान्सामा सबैभन्दा बढी उपयोग गरिने तरकारी पनि आलु नै हो । किनकी आलु जुनसुकै तरकारीमा मिसाएर खान सकिन्छ । साथै, यसको धेरै किसिमका परिकारसमेत बनाउन मिल्छ । आलु स्वास्थ्य र पोषणका दृष्टिकोणले समेत उपयोगी छ।a
माटो भित्र फल्ने आलुमा अत्यधिक पोषण तत्व रहन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ।
आलुमा भिटामिन, खनिज र एन्टि अक्सिडेन्ट लगायतका तत्व अधिक मात्रामा पाइन्छ । आलुमा पाइने एन्टि अक्सिडेन्टले क्यान्सर, मधुमेह, हृदय रोग लगायत पुराना रोगहरुमा समेत उपयोगी हुन्छ ।
यदि तपाईंमा रक्तचाप, प्रतिरोधात्मक शक्ति, पाचन प्रणाली लगायतका समस्या छन् भने आलुको सेवन निकै उपयोगी मानिन्छ।
आलुमा प्रशस्त स्टार्चको मात्रा हुने भएकाले यसले रगतमा इन्सुलिनको मात्रालाई कन्ट्रोल गर्छ । र ब्लड सुगर हुने खतरा घटाउँछ ।
आलुको नियमित सेवन गर्ने ब्यक्तिलाई ग्यास, कब्जियत, पेट दुख्ने लगायतका रोगको जोखिम कम हुन्छ।
Previous Previous post: लगानीको हिसाबले सेयर बजार कत्तिको सुरक्षित छ? सेयर बजारका नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई सुझाव
Next Next post: घरमा दियो बाल्दा कुन दिशातर्फ फर्काएर बाल्दा शुभ हुन्छ ? जान्नुहोस